Sheekada filimka Sarkar: Xarakaadka Vijay u daawo filimkan sheekadiisa qaybta dambe liidato! – Filimside.net
Sheekada filimka Sarkar: Xarakaadka Vijay u daawo filimkan sheekadiisa qaybta dambe liidato!
November 6, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 6, 2018
Superstar Vijay filimkiisa Sarkar ayaa maanta tiyaatarada la saaray xili feestada Diwali gudaha Hindiya looga dabaal dagayo wuxuuna taageerayaashiisa ugu tala galay mashruucaan inay kula feesteeyaan.
Jilaayaasha filimkan: Vijay,Keerthy Suresh,Varalaxmi Sarathkumar
Fariinta Filimka Sarkar Oo Kooban: Sundar (Vijay) waa ganacsade weyn kaasi oo Mareekanka dagan balse gudaha Hindiya dib ugu soo laabanayo waxayna shirkadaha waa weyn iyo ganacsatada cabsi qabaan inuu hormarkooda ragaadiyo ama awoodiisa dhaqaale kula wareego.
Balse Sundar (Vijay) u jeedo kale ayuu Hindiya ugu soo laabtay oo ah inuu codkiisa ka dhiibto doorashada qaran laakiin waxaa la yaab ku noqoneyso in mar hore codkiisa qof kale codeeyay oo magaciisa adeegsaday!
Sundar (Vijay) wuxuu go’aan ku gaarayaa inuu dacwad furo kana sal gaaro sababta ay ku dhacday asigoo muwaadin Hindi ah codkiisa qof kale adeegsado weliba asigoo dalka ku sugan.
Sundar (Vijay) waxaa kusoo furmayaan albaabo badan oo colaadooda iyo dhibkooda wataan wuxuuna ogaanaa in dalka ay ka jiraan xisbiyo siyasaadeed oo dadka masaakiinta ah codkooda ku shubtaan.
Haddaba qurba joogii gudaha Hindiya kusoo laabtay Sundar (Vijay) wuxuu u dagaalamaa inuu dadka xaqooda usoo dhiciyo sidoo kalena siyaasi xisbi furto oo dagaal cusub galo mid siyaasada ah halistiisana wato.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Sarkar: Director AR Murugadoss iyo Vijay waxay horey u sameeyeen labo filim oo Classic ah ‘Thupakki’ iyo ‘Kaththi’ markaana arimaha siyaasada ayay filimkooda Sarkar kusoo bandhigeen wuxuu filimkan ku wanaagsan yahay halka saac ee hore sida heerka sare ah ee la isugu daba riday balse nasiib daro halka saac ee dambe ama kala bar marka uu soo gaaro ayuu fariin ahaan xiisaha uu lahaa luminaa.
Director AR Murugadoss wuxuu ku dadaalay inuu raali galiyo ama qanciyo taageerayaasha Vijay madaama uu siiyay awood weyn, hadalada aan laga xiiso dhigeyn iyo xarakaad aan dhamaad laheyn balse wuxuu hilmaamay filimka sheeko ahaan inuu tayeeyo sidoo kalena barabagaandada Vijay kaliya uusan u badinin sidoo kalena dadka dhex dhexaadka ah ee daawashada aflaanta jecel inuu filim tayo wanaagsan ka gado!
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha: Marnaba lagama yaabo Superstar Vijay inuu ku niyad jebiyo mana kusii jirto filimka Sarkar door ahaan xarakaadka u sameenayo iyo awoodiisa dhanka shaashada waa hubaal haddii aad tahay taageero Vijay in mashruucaan marwalbo aad ku cesh ceshan doontid xarakaadiisa oo xad dhaaf ah awgeed.
Vijay doorkiisa ganacsadaha, siyaasaga iyo wajiyada sida uu u bad badalaanayo ayaa cajiib ah Action, Dance iyo hadalo xiiso leh ugu imaaw Sarkar oo Vijay u gaar ah.
Atirishada Keerthy Suresh qurux ayay la timid shaashada iyo Vijay inay jacayl la wadaagto laakiin micno kale oo ay filimkan u sameeneyso ayaanba jirin.
Varalaxmi Sarathkumar oo ah laadarka ugu awooda badan filimkan saameyn wacan ayuu la yimid waana qofka labaad ee Vijay kusoo xigo kaasi oo filimkan loo daawan karo.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Sarkar:
Bandhiga cajiibka badan ee Vijay sameeyay.
Halka saac hore oo heer sare ah.
Action iyo xeeladaha siyaasada oo kusoo jiidanayaan
Qaybta dambe ama halka saac dambe oo sheeko ahaan jiho fiican iyo xiiso laheyn.
Laadarka ama laadariinta filimkan oo aan awood loo yeelin si ay Vijay ula xifaaltamaan.
Muusigada filimkan oo iska dhex dhexaad ah kaliya muusiga gadaal ka yeereyso (Background Score) ayaa wanaagsan.
Qiimeynta Sheekada Filimka Sarkar: 2.5/5 (Labo xidig iyo bar)
Gunaanad: Sarkar waa filim Vijay uu ku xarakeeyay halkiisa saac horena heer sare ah waa hubaal in taageerayaashiisa feestadan Diwali filimkan siweyn u daawan doonaan laakiin feestada marka la baxo dadka caadiga ah ee aan Vijay taagrin uma soo daawasho tagi doonaan taasi oo ku keeni doonto culees ku aadan 130 Crore ka badan kooxda cajaladaha qeybiyaan inuu dib usoo celiyo ama 200 Crore ka badan inuu soo xareeyo si uu guul u gaaro!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Sarkar ee Superstar Vijay si heer sare ah ugu xarakeeyay: